Kooxda Heerka koobaad ee Waxool ayaa soo bandhigay Saxeexyo Cusub iyo Ciyaartooyo kooxda heshiis wakhti dheer ah la galay.
May 26, 2021 by rooble
Kooxda Wasarada Xanaadada Xoolaha (Waxool) ayaa soo bandhigay Saxeexa Laba ciyaartooy oo cusub oo kala ah Ciyaaryahan Suldaan Abdi Xasan oo hore uga tirsanan jiray kooxda heerka koobaad ee Ciidanka asluubta ciyaaryahanka ayaa kooxda ugu soo wareegay hab Free ah Ciyaaryahan Hamse Asad oo hore uga tirsanan jiray kooxda heerka koobaad ee W.Caafimadka ciyaaryahanka ayaa … Read more
Categories Transfer News Leave a comment
Khadar Abdilaahi Warsame
May 15, 2021 by rooble
Khadar Abdilaahi Warsame(Khadar Islaam) ayaa maanta si rasmi ah ugu biiray kooxada Ciidanka Asluubta kaas oo kooxda u saxeexay heshiis Mudo Laba Sano ah , Khadar ayaa kooxda ugu soo wareegay heshiis ah Xor ah . Khadar ayaa kooxdiisi hore ee Xidigaha cirka u ciyaaray 7 kulan oo ay kooxdu ciyaaray qaybtii hore ee xili … Read more
Categories Transfer News Tags Khadar Islaam Leave a comment
Jamaal Mataan Cabdi
May 15, 2021 May 11, 2021 by rooble
Kooxda Heerka Labaad ee Wasaaradda Warfaafinta JSL Ayaa lasoo wareegtay Ciyaar yahan Jamaal Mataan oo hore ugu tirsana kooxada heerka koobaad ee W.Ganacsiga Ciyaar-yahanka ayaa kooxda u saxeexay heshiis Laba sano ah .
Kooxda Ciidanka Qaranka Ee Gaashaan ayaa soo bandhigay Saxeexa laba Ciyaartay?
May 6, 2021 by rooble
Kooxda Heerka koobaad ee Ciidanka Qaranka ee gaashaan Qaybteeda Caasimada Hargeisa ayaa soo bandhigay saxeexa Laba gool wade oo ay kooxdu habeenkii xalay aha ku sheecisay in ay la gashay heshiis labadan gool wade ayaa kala ahaa. 1.Gool-haye Maxamed kamasare oo ay kooxdu la gashay heshiis laba sano ah , waxanu heshiiskan ku dhacay free … Read more
Hordhac: Lugta Labaad ee Semi-Finalka Horyaalka kooxaha Yurub ee caawa Chelsea iyo Real Madrid?
May 5, 2021 by rooble
Kooxda Chelsea ayaa marti galin doonta kooxda Real Madrid kulan ka tirsan lugta 2-aad ee Semi-final-ka tartanka champions League kulan ka dhici doona Stamford Bridge. Labada kooxood ayaa kulanka soo galaya iyaga oo isha ku haya sidii ay u gaadhi lahaayeen Final-ka tartanka Champions League xilli ciyaareedkan iyaga oo isku fursad haysta maadama ayna kooxna … Read more
Kooxda Man United oo la qorshaynayo in 3 dhibcood laga jaro Premier League + Maxaa sababay?
May 3, 2021 by rooble
Kooxda Man United ayaa dhibco laga jari karaa maadama premeir League iyo sharciga FA-gu dhigeen in dhibco laga jaro kooxda ay taageerayaasheedu sababta u noqdaan in kulan la baajiyo. Red Devils ayaa la ciyaari lahayd Liverpool Axadii 6:30 Wakhtiga geeska afrika. laakiin waxa la baajiyay kulankaas sabab la xidhiidha mudaharaadyo ka dhacay Old Trafford iyo … Read more
Cristiano Ronaldo oo wax yar u jira inuu dhigo rikoodh aan hore dunida looga dhigin?
Xiddiga kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa ku sii dhawaanaya in uu dhigo rikoodh taariikhi ah oo aan horay looga dhigin kubada cagta iyo in uu sii wado dhigista rikoodhada kubada cagta kaddib markii uu laba gool ka dhaliyay kooxda Udinese kulankii shalay. Xiddiga Cristiano Ronaldo Ayaa goolashiisa horyaalka Serie A-da xilli ciayareedkan kor ugu … Read more
Ahmed Xirsi Siciid
May 1, 2021 by rooble
W.Maaliyada si toos ah ula soo wareegtay ciyaar yahan ahmed xirsi (Wali baso) kaas oo ay kala soo wareegtay gobolka soo dhigooda dawlada hoose ee berbera ciyaar yahanka ayaa ka mid noqonaya ciyaaryahana kooxdu ay doonayso in ay isbadal ku samayso inta lugu gudo jiro xili ciyaareedkan .
Weeraryahan heshiis cusub u saxeexay Arsenal?
April 27, 2021 by rooble
Weeraryahanka da’da yar ee Folarin Balogun ayaa soo afjaray calaamatu su’aal saarnayd mustaqbal kiisa kaddib markii uu shalay kooxdiisa Arsenal u saxeexay heshiis muddo dheer. Weeraryahankan 19 jirka ah ayaa Arsenal joogay tan iyo markii da’diisu ahayd 8 sanno isla markaana waxa uu xilli-ciyaareedkan saftay kulamo waa weyn. Agaasimaha farsamada Arsenal Edu ayaa sheegay in … Read more
Ronaldo oo dhammaadka xilli-ciyaareedkan ku biiri doona laba kooxood midkood
Cristiano Ronaldo ayaa isku dayi doona in uu dhammaadka xilli-ciyaareedkan ka hulleelo kooxda Juventus haddii ay ku fashilanto in ay u soo baxdo horyaalka kooxaha Yurub xilli-ciyaareedka dambe. Laacibkan u dhashay waddanka Portugal ayaa tixgelin doona in uu midkood ku biiro kooxaha Manchester United iyo PSG haddii Juventus ku fashilanto u soo bixidda Champions League … Read more
Gaashaan FC	 16 7	 3	 6	 24
Waxool Fc	 17 6	 2	 9	 20
Asluubta Fc	 16 4	 6	 6	 18
Ganacsiga Fc	 17 4	 5	 8	 17
Biyaha Fc	 17 3	 2	 12	 11